Nhau - Zvakanakira zvina zve piezoelectric inkjet yekudhinda tekinoroji
Yakakura Fomati Printer
UV flatbed purinda
Muchina wekudhinda mureza
Musha-unoshandiswa wekushongedza muchina
1 musoro wekushongedza muchina
Tsono gumi nembiri
2 misoro yekushongedza muchina
4 misoro yakashongedzwa muchina
6 misoro yakashongedzwa muchina
Desktop yekucheka kuronga
Contour yekucheka kuronga
Double chiteshi kupisa muchina wekudhinda
Cap kupisa kupisa muchina
Mug kupisa muchina wekudhinda
Plate kupisa muchina muchina
5 mu1 kupisa muchina wekudhinda
8 mu 1 combo kupisa muchina wekudhinda
4 ruvara uye 4 chiteshi screen yekudhinda muchina
4 ruvara uye 4 chiteshi vernier skrini yekudhinda muchina
Kupisa uye kutonhora laminating muchina
Mudiki laminating muchina
YH360 laminating muchina
YH460 laminating muchina
YH650 laminating muchina
Hot laminating muchina
Cold laminating uye yekucheka muchina
CO2 Laser engraver uye aricheke
Fiber Laser engraver uye aricheke
Kadhi uye muchina wechipo
Flatbed inopisa pepa muchina
PVC kadhi purinda
Kadhi embossing muchina
Photo bhuku remanyorerwo kugadzira Machine
Album kugadzira muchina
Zvakanakira zvina zve piezoelectric inkjet yekudhinda tekinoroji
Sezvo isu tese tichiziva, yekupisa furo inkjet tekinoroji yakatonga hombe fomati inkjet musika weprinta kwemakore mazhinji. Muchokwadi, piezoelectric inkjet tekinoroji yakagadzirisa shanduko muineti tekinoroji. Iyo yakaiswa kune desktop desktop maprinta kwenguva yakareba. Nekuvandudza uye kukura kwehunyanzvi, hombe-fomati piezoelectric inkjet maprinta akabudawo mumakore apfuura.
Seizvo zita rinoratidzira, musimboti weiyo inkjet tekinoroji yekupisa furo ndeye kushandisa kushomeka kudiki kuti ikurumidze kupisa inki, uyezve kugadzira matema kuti abudiswe. Nheyo ye piezoelectric inkjet inoshandisa piezoelectric crystal kukanganisa uye kusimbisa diaphragm yakagadziriswa mumusoro wekudhinda kuitira kuti inki mumusoro wekudhinda ibudiswe.
Kubva pamisimboti yataurwa pamusoro apa, tinogona kupfupisa zvakanakira piezoelectric inkjet tekinoroji painoshandiswa kune yakakura-fomati yekudhinda mashandiro:
(1) Inoenderana nemamwe mainki
Iko kushandiswa kweanozoelectric nozzles kunogona kuve kwakapfava mukusarudza inki dzemhando dzakasiyana. Sezvo iyo yekupisa furo inkjet nzira inoda kupisa iyo inki, chimiro chemakemikari cheinki chinofanira kunge chakanyatsoenderana neinki cartridge. Sezvo piezoelectric inkjet nzira isingade kupisa inki, sarudzo yeingi inogona kuve yakajeka.
Chinhu chakanakisa chemubatsiro uyu kushandisa inki ine pigmented. Iko kunakira kweingi inki ndeyekuti inopokana neUV Radiation kupfuura dhayi (Dye yakavakirwa) inki, uye inogona kugara kwenguva refu panze. Iyo inogona kuve nehunhu uhwu nekuti iyo pigment mamorekuru mune iyo pigment ink inowanzo kuunganidzwa mumapoka. Mushure mekunge maumbirwo akagadzirwa nema pigment mamorekuru akajekeswa nemwaranzi yeultraviolet, kunyangwe mamwe mamorekuru e pigment aparadzwa, kuchine mamwe mamorekuru e pigment ekuchengetedza iyo yekutanga Ruvara.
Uye zvakare, iyo pigment mamorekuru ichagadzirawo kristaro lattice. Pasi peiyo ultraviolet radiation, iyo crystal lattice inopararira uye inotora chikamu cheiyo ray simba, nokudaro ichidzivirira iyo pigment particles kubva mukukuvara. Ichi chimiro chakanyanya kukosha.
Ehe, pigment inki ine zvakare nekukanganisa kwayo, iyo yakajeka kwazvo ndeyekuti iyo pigment iripo mune mamiriro ezvimedu mune iyo inki. Izvi zvidimbu zvinoparadzira mwenje zvoita kuti mufananidzo uve murima. Kunyangwe vamwe vagadziri vaishandisa pigs inks mune yekupisa furo inkjet maprinta munguva yakapfuura, nekuda kwehunhu hwepolymerization uye kunaya kwemavara mamorekuru, hazvidzivirike kuti mabhagi ayo achavharwa. Kunyangwe ikatsamwa, zvinongokonzera inki. Iko kusungirirwa kwakanyanya kunetsa kubata, uye kuvhara kuri kwakanyanya. Mushure memakore ekutsvaga, kune mamwezve akavandudzwa pigment inks yeanopisa furo inkjet anodhinda pamusika nhasi, kusanganisira yakavandudzwa inki kemisitiri kudzikisira kuunganidzwa kwezvimedu, uye kuwanda Kwakanaka kunoita kuti hupamhi hwema pigment mamorekuru ave madiki pane iyo wavelength ye iyo yakazara spectrum yekudzivirira kupararira kwechiedza. Nekudaro, vashandisi vakataura kuti dambudziko rekuvhara richiripo, kana iro mufananidzo wechivara uchiri wakareruka.
Idzi matambudziko ari pamusoro achadzikiswa zvakanyanya mu piezoelectric inkjet tekinoroji, uye iko kukonzeresa kunoitwa nekuwedzera kwekristaro kunogona kuve nechokwadi chekuti kamwene kasingavharwe, uye iyo ink yevasungwa inogona kunyatso kudzorwa nekuti haina kukanganiswa nekupisa. Kana, mukobvu inki inogona zvakare kudzikisa dambudziko rerima.
(maviri) inogona kuve yakakwenenzverwa yakakwira solid oki inki Piezoelectric mabuji anogona kusarudza inki ine yakakwira yakasimba yezvinyorwa. Kazhinji, iyo yemvura yeingi inoshandiswa mune yekupisa furo inkjet maprinta anofanirwa kuve ari pakati pe70% ne90% kuchengetedza mikova yakavhurika uye kushandira pamwe nemhedzisiro yekupisa. Izvo zvinodikanwa kubvumidza nguva yakaringana yekuti ingi iome pane vezvenhau pasina kupararira nekunze, asi dambudziko nderekuti ichi chinodiwa chinodzivirira yekupisa furo inkjet maprinta kubva kuwedzera kuwedzera kudhinda kumhanya. Nekuda kweizvi, epamhepo piezoelectric inkjet maprinta ari pamusika anokurumidza kupfuura anopisa anopupa firimu.
Sezvo iko kushandiswa kwepayzoelectric nozzles kunogona kusarudza inki ine yakakwira yakasimba yezvinhu, kuvandudza uye kugadzirwa kwemvura isina mvura midhiya nezvimwe zvinodyiwa zvichave nyore, uye iyo inogadzirwa midhiya inogona zvakare kuve neisina mvura yekuita.
(2) Mufananidzo wacho wakajeka
Iko kushandiswa kweyezozoctric nozzles kunogona kudzora zvirinani chimiro uye saizi yemachira eingi, zvichikonzera kujekesa kwemifananidzo mhedzisiro.
Kana hunyanzvi hwekupupira furo inkjet tekinoroji ichishandiswa, inki inowira pamusoro peiyo svikiro muchimiro chekupwanya. Iyo piezoelectric inkjet ink inosanganiswa neyepakati muchimiro cheLay. Nekushandisa iyo voltage kune piezoelectric kristaro uye kuenzanisa iyo dhayamita yeinkjet, saizi uye chimiro chemainji madota zvinogona kudzorwa zvirinani. Naizvozvo, pakagadziriswa kumwe chete, mufananidzo unoburitswa nepiezoelectric inkjet printa ichave yakajeka uye yakatetepa.
(3) Kuvandudza uye kuburitsa mabhenefiti
Iko kushandiswa kwe piezoelectric inkjet tekinoroji kunogona kuponesa dambudziko rekutsiva ingi misoro uye inki cartridges uye kudzikisa mutengo. Mune piezoelectric inkjet tekinoroji, iyo inki haizopisa, pamwe chete nechisimba chinogadzirwa ne piezoelectric crystal, iyo piezoelectric nozzle inogona kushandiswa zvachose mune dzidziso.
Parizvino, Yinghe kambani yakazvipira kugadzirwa nekukurumidza uye zvakanyatsojeka piezoelectric inkjet maprinta. Parizvino, iyo 1.8 / 2.5 / 3.2 metres purinda inogadzirwa nekambani yedu inogamuchirwa nevatengi vatengi vekunze nekune dzimwe nyika. Yedu piezoelectric inkjet muchina unotora otomatiki Iyo inki yekumwa uye otomatiki yekukwatura system inoona kuti iwo mabhugi haana kumiswa uye iwo mabhuru anogara ari mune yakanaka mamiriro. Iyo sisitimu inopa 1440 yakakwira-chaiyo uye yepamusoro-chaiyo yekudhinda nzira. Vashandisi vanogona kusarudza zvakasiyana siyana zvekudhinda. Iko kushandiswa kweatatu kuomesa uye mweya yekuomesa system inogona kuwana ipapo Iyo pfapfaidzo uye yakaoma basa, Ultra-yakaderera kugadzirwa mutengo, rega iwe kukurumidza uye nyore kuwana kudzoka.
Kwete 8 yenyika mugwagwa, Baimibu Xiushui Industrial Park, 106 nyika mugwagwa, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China.